Farta ku sawir farta ku fiiq qaabka Breakboard Arkanoid | Androidsis
Jebintu waxay noo geynaysaa isla ciyaar sida loo yaqaan 'Arkanoid' taas oo ay tahay inaan ku siino kubadaha koofiyada si aysan u dhicin. Sidaa awgeed waxaan la kulanay isku day isku mid ah oo aan caadi ahayn kaas oo lagu kala soocay iyada oo loo baahan yahay in la sawiro palette.
Mana ahaan doonto hal jeer, laakiin markasta oo aan dooneyno inaan garaacno kubada si loo tuuro dariiqa ku habboon ee lagu burburin karo dhammaan baloogyada aad ka hesho jidkaaga. Ciyaar fiican oo ka timaadda qaabkeeda muuqaalka ah sida "qalin qalin" taasna waxay siinaysaa middaas si loo abuuro ciyaar la jeclaaday xilligii ugu horreeyay.
1 Ku burburi dhammaan baloogyada iyadoo lagu dhajinayo suuf
2 Khadka ha uga dhammaanin Breakboard
3 Joogto si fiican loo sawiray
Ku burburi dhammaan baloogyada iyadoo lagu dhajinayo suuf
Himiladu waa riix hal mar shaashadda si aad u toosiso dhabbaha bilowga hore ee kubbadda markaa isla markaaba, markay ku dhufato qaar ka mid ah gidaarrada ama baloogyadaas si aan u burburinno, waxaan ku sawiri doonnaa jaantus jaantus ama jiif ah sidaas ayaanna mar labaad ugu soo laabannaa si aan u burburinno dhismooyin badan
El ujeedadu waa in la burburiyo dhammaan baloogyada ku jira heerka iyo ilaa inta aynaan isticmaalin dhammaan khadadka aan ka heli karno dhalada ku taal shaashadda dusheeda.
Sidaas noo soo jiito ciyaar lagu guuleysto taas oo markaan u dhowaanno aan heli doonno daqiiqado wanaagsan oo firaaqo ah. Dhibaatadu waxay ku jirtaa ogaanshaha sida loo sawiro baalladan xagasha midig ama xagal si ay kubaddu toos ugu socoto dhanka baloogyada oo aakhirka la burburiyo.
Khadka ha uga dhammaanin Breakboard
Marka, haddii aynaan awoodin inaan burburinno dhammaan baloogyada waa inaan bilownaa heerka. Marka laga reebo dhammaan wixii la yiri, waan sidoo kale yeelan doonnaa caawimaadda xoog-kicinta qaarkood kuwaas oo ka soo baxa baloogyadaas burburay taas oo noo oggolaaneysa inaan kordhino xawaaraha kubbadda ama xitaa aan ka dhigno mid yar si ay u soo gasho meelaha qaarkood.
Isku soo wada duuboo waxaan leennahay 100 heer farsamo gacmeed iyo taas oo aan loo baahnayn madaxdii ugu dambaysay si ay wax waliba u sii adkaadaan oo waxaan ku xujeyneynaa horumariye mas'uul ka ah inuu noo keeno noocan "Arkanoid".
Habka lacag-bixinta Breakboard isticmaala tamarta si naloo siiyo tiro qalin ah 15kii daqiiqaba. Haddii qalinku naga dhammaado waa inaan sugnaa ama tagnaa goobta wax lagu iibsado si aan u ciyaarno. Si lamid ah ayaa ku dhacda xiddigaha waxayna noo ogolaan doonaan inaan sii wadno heerka aan ka tagnay marka uma baahnin inaan dib u bilowno.
Joogto si fiican loo sawiray
Dhamaadka waxaan leenahay dareenka leh Breakboard of Noqo mid caadi ah oo jabiya kaas oo awood u leh inuu nagu dhejiyo heerarka gacanta lagu qaabeeyey. Dulqaad yar iyo farshaxan yar oo lagu ogaanayo sida loo sawiro baallayaashaas si tartiib tartiib ah loogu burburiyo baloogyada, waxay awood u leedahay inay soo saarto khibrad ciyaar xiiso leh; haddii aad rabto khibrad diiran, ha moogaanin Gacaliye Bisadeyda.
Muuqaal ahaan wuxuu leeyahay qaabkaas qalin-qorista ah kaas oo mar kasta oo aan ku dhufanno dhisme oo uu burburay, animation-ka la soo saaray ayaa ah xayiraad la tirtirayo. Marka waxay umuuqataa inaan ku ciyaareyno sawir gacmeed kaas oo farteennu qalin ku noqoneyso oo aan ku soo qaadanno nacnac khayaali ah oo baaba'a ka dib markii aan kubbada garaacno.
Breakboard waa ciyaar bilaash ah oo aad u xiiso badan kaas oo tamar loo isticmaalo si aan usii wadno ciyaarista. Dabcan, haddii aad leedahay aqoon ku filan uma baahnid inaad sanduuqa la dhex mariso qalimaanta ay ku bixiyaan bilaash.
Arkanoid-ka waxaan ku leenahay arimahan aan caadiga ahayn oo kugu dhejin doona illaa aad ka dhammeyso heerarkiisa 100.
Qaabkiisa sawir u eg
Ku sawir baawladda aad ku garaacayso
100 Heerarka gacanta loo qaabeeyey
Isticmaal tamar si aad ciyaarta u sii wadato
BreakBoard: Burburka Jebiyaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Farta ku sawir farta ku taal Breakboard a la Arkanoid
Samsung iyo cilmi baarayaasha Stanford waxay abuuraan 10.000 muuqaalka PPI OLED